Sidee isbedelka cimilada u saameeyaa barakaca dadka? | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun ee isbeddelka cimilada ayaa ah naftaada ku arag xaalad ah inaad ka baxdo wixii gurigaaga ahaa noloshaada oo dhan. Hadday tahay duufaan halakeysay magaaladaada, heerka badda ee sii kordhaya ee guryaha u hanjabaya, ama abaarta oo yareysa kaydka biyaha si dhakhso ah oo ay u keento dhimasho biyo la’aanta deegaankaaga ka jirta awgeed. Intii aan raadsan lahaa nolol ka wanaagsan.
Aadamuhu waa xayawaan aad u caqli badan oo yaqaanay sida loola qabsado loona gumeeyo dhammaan qaybaha adduunka, laakiin dabeecadda ayaa waligeed lahayd pie horteenna. Tani waa sida isbeddelka cimilada uu u saameeyo barakicinta dadka sida laga soo xigtay xogta Kormeerka Barakaca Gudaha (IMDC)
Intii lagu guda jiray 2016, dhowr musiibooyin dabiici ah ayaa dhacay kuwaas oo tijaabiyay malaayiin dad ah oo adduunka ku nool. Kaliya Cuba, Duufaanta Matthew ayaa hal milyan oo qof ku qasabtay inay ka baxaan, iyadoo aan la tirin kuwa ay ahayd inay ka baxaan sidoo kale guryahooda oo ka luntay awgeed.
Filibiin, duufaano xoog leh iyo duufaano kulul oo kulul ku dhowaad 15 milyan oo qof waxay ahayd inay dalka ka baxaan. Dalka Myanmar, dhul gariir iyo daadad mahiigaan ah ayaa barakiciyay in ka badan 500.000 oo qof sanadkii 2016.
Barakicinta dadka sababo la xiriira isku dhacyada (tiirka labaad iyo saddexaad) iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Sawir - Internal-displacement.org
Aasiya, iyo gaar ahaan Shiinaha iyo Hindiya, kororka saxaraha iyo la'aanta ilaha aasaasiga ah, iyo sidoo kale wasakheynta deegaanka, ayaa sababay barakaca in ka badan toddobo milyan iyo in ka badan laba milyan oo qof siday u kala horreeyaan.
Sida laga soo xigtay UNHCR, Hay'adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay, celcelis ahaan 21,5 milyan oo qof ayaa sannad kasta ku barokiciyay hanjabaado la xiriira cimilada tan iyo sanadkii 2008. Haddii ay sidan sii socoto oo aan wax talaabo ah laga qaadin wax ka qabashada isbedelka cimilada, tiradaas ayaa la filayaa inay kororto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Sidee isbedelka cimilada u saameeyaa barakaca dadka?
Saamaynta isbeddelka cimilada ayaa sida ugu wanaagsan looga cabbiri karaa hawada sare